Sudoku em emulator.online မှ ဝင်၍ ပျော်မွေ့ပါ
Sudoku နံပါတ်ပဟေlikeိဆန်သောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယုတ္တိ - သင်္ချာကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုနှင့်မဟာဗျူဟာမြောက်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုကိုလှုံ့ဆော်သည်။ အစပိုင်းတွင်၎င်းသည်အလွန်ခက်ခဲပုံရသည်၊ သို့သော်သင်နည်းနည်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဖြင့်သင့်လျော်သောနည်းဗျူဟာများကိုသိရှိထားခြင်းဖြင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပိုမိုလွယ်ကူ။ ဖျော်ဖြေမှုဖြစ်လာလိမ့်မည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
သင်ရှာပါလိမ့်မယ် အတော်ကြာသေးငယ်တဲ့ရင်ပြင်သို့ခွဲခြားသောကြီးမားသောစတုရန်းနှင့်ဤသေးငယ်တဲ့ရင်ပြင်အလယ်တန်းရင်ပြင်သို့အုပ်စုဖွဲ့နေကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီအလတ်စားစတုရန်းအတွင်း၌9သေးငယ်တဲ့ရင်ပြင်ရှိပါတယ်။
လိုင်းအားလုံး (အလျားလိုက်) မည်သည့်ထပ်ခါတလဲလဲမပါဘဲ, 1 ကနေ9ကနေအားလုံးနံပါတ်များရှိသည်။
ကော်လံအားလုံး (ဒေါင်လိုက်) မည်သည့်ထပ်ခါတလဲလဲမပါဘဲ, 1 ကနေ9ကနေအားလုံးနံပါတ်များရှိသည်။
အားလုံး အလယ်ရင်ပြင် သူတို့မှာနံပါတ် ၁ ကနေ ၉ အထိရှိတယ်၊ ထပ်မထပ်ဘဲရှိတယ်။
ကောင်းသောဂျပန်ဘာသာတွင်၊ ငါတို့ရှိသမျှသည်သိသောနာမသည်စကားစု၏ရိုးရှင်းလွယ်ကူခြင်းမျှသာမဟုတ်ပါ "suji wa dokushin ni kagiru", ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ "နံပါတ်များကိုထူးခြားတဲ့ဖြစ်ရမည်ထို့အပြင်၎င်းသည်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းညွှန်ပြသည့်အလွန်ရိုးရှင်းသောကိန်းဂဏန်းများကိုရည်ညွှန်းသည်။ သူ၏ရည်ရွယ်ချက်သည်ဗလာသေတ္တာများကိုစနစ်တကျကိန်းဂဏန်းအစီအစဉ်များဖြင့်ဖြည့်စွက်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက်ယုတ္တိဗေဒနှင့်ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုလိုအပ်သည်။
၎င်း၏အမည်ကိုနေသော်လည်း, sudoku ကို Japan တွင်မဖန်တီးခဲ့ပါ, တီထွင်မှုဆွစ်သင်္ချာပညာရှင်မှစွပ်စွဲနေသည် Leonhard Euler XVIII ရာစု၌သူခေါ်သောအရာကိုဖန်တီးလက်တင်ရင်ပြင်များ"ကိန်းဂဏန်းများသည်အတန်းတစ်ခုစီနှင့်ကော်လံတစ်ခုစီ၌တစ်ကြိမ်သာတွေ့ရလိမ့်မည်။9တန်းနှင့်9ကော်လံ ဘယ်အချိန်မှာလူကြိုက်များဖြစ်လာခဲ့သည် ယူအက်စ်တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ 1970 ခုနှစ်တွင်။
အဲဒီမှာရှိခဲ့သည် 1984အခါဂျပန် Maki Kaji ဂိမ်းနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ မိမိနေရင်းပြည်သို့ပြန်သွားသောအခါ Kaji ဂိမ်းတိုးတက်ခဲ့သည် (သူသည်သေတ္တာထဲတွင်ပေါ်လာသောသဲလွန်စနံပါတ်များကိုပေးခဲ့ပြီးမတူညီသောအခက်အခဲများကိုဖန်တီးပေးခဲ့သည်။ ၎င်းကိုဗတ္တိဇံပေးပြီး၎င်းကိုသူ၏နိုင်ငံသားများအကြားဖျားနာစေခဲ့သည်။ ယနေ့ဂျပန်တွင်ဆူဒိုကူတွင်အထူးပြုမဂ္ဂဇင်း ၆၀၀,၀၀၀ ကျော်ရှိသည်။
အနောက်နိုင်ငံများတွင်လောင်းကစားသည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်အရူးအမူးဖြစ်ခဲ့သည်။ ပထမအဆင့်ကိုနယူးဇီလန်နိုင်ငံရောက်သည့် ၁၉၉၇ တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည် ဝိန်း Gould ဂျပန်သို့သွားရောက်ခဲ့သည်Sudoku အကြောင်းလေ့လာခဲ့ပြီးဂိမ်းအတွက်ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သော ၈ လကသူ၏တီထွင်မှုဖန်တီးမှုကိုနေ့စဉ်သတင်းစာ The Times သတင်းစာကမကြာမီကမ္ဘာတစ်လွှားပြိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်ဖော်ပြခဲ့သည်။
ထောင့်ဖြတ်: ကစားရန်ကစားရန်အစဉ်အလာအတိုင်း Sudoku ကဲ့သို့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတိုင်းလိုက်နာရမည်။ ဆိုလိုသည်မှာအလျားလိုက်နှင့်ဒေါင်လိုက်လိုင်းများတွင်ထပ်ခါတလဲလဲပြောစရာမရှိပဲ 1 မှ9အထိနံပါတ်များကို သုံး၍ ရင်ပြင်အားလုံးကိုပြည့်စေရမည်။ Sudoku ပဟေpိ၏အထင်ရှားဆုံးသောရှုထောင့်မှာဒေါင်လိုက်နှင့်အလျားလိုက်မျဉ်းကြောင်းများကိုချိတ်ဆက်ထားသည့်အပြင် ၁ ပုံမှ ၉ အထိနံပါတ်များပါသောအလယ်ဗဟိုထောင့်ဖြတ်နှစ်ခုကိုလုပ်ရမည်။
ကာကူရို: kakuro ကစားခြင်းသည်ခက်ခဲသည်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည် sudoku ထက် ပို၍ ရှုပ်ထွေးသည်ဟုယူဆသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာနံပါတ်များ ၁ မှ ၉ နံပါတ်များကိုလိုင်း၏စဉ်ဆက်မပြတ်နှင့်ကော်လံ၏အစဉ်လိုက်တွင်ထပ်ခါတလဲလဲမထားရှိနိုင်စေရန်ဖြစ်သည်။ နံပါတ်များ (အလျားလိုက် (သို့) ဒေါင်လိုက်) သည်သက်ဆိုင်သည့်အချက်နှင့်တူညီရန်လိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ။
လူသတ်သမား က Sudoku နှင့် Kakuro ပေါင်းစပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ထပ်မံ၍ နံပါတ်များ ထပ်မံ၍ မရနိုင်သည့်နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ထားသည့်နေရာများရှိပြီးထိုပမာဏသည်သတ်မှတ်ထားသောတန်ဖိုးကိုပေးရမည်။
Megasudoku: ဂဏန်း ၁ မှ ၁၂ ကိုတစ်တန်းစီ၊ ကော်လံနှင့်စတုရန်းတစ်ခုစီတွင်တစ်ကြိမ်တည်းသာဖော်ပြပါ။ ရိုးရာတ ဦး တည်းဆင်တူပေမယ့်နောက်ထပ်သုံးနံပါတ်များနှင့်အတူ။
Multisudokuဖြေ - အဲဒါကို sudoku ပဟေlesိများစွာနဲ့အတူတကွဖွဲ့စည်းထားတယ်။
Sudoku solve ဖြေရှင်းရန်သိကောင်းစရာများ
Sudoku ကိုစတင်ဖြေရှင်းဖို့ပထမဆုံးလုပ်ရမယ် လမ်းညွှန်ဖို့ပုံစံကိုရွေးချယ်ပါ (အတန်း, ကော်လံသို့မဟုတ်စတုရန်း) ။ အကယ်၍ သင်သည်တစ်ခုတည်းကိုသာရွေး။ အရာအားလုံးကိုချက်ချင်းလုပ်ဆောင်ရန်မကြိုးစားပါကဂိမ်းတွင်သင်ပိုမိုကြာရှည်မည့်အရာအားလုံးကိုရှုပ်ထွေးစေပြီးရှုပ်ထွေးစေနိုင်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်, သငျသညျလိုင်းများအားဖြင့်ဖြေရှင်းချက်စတင်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်သင်ပထမ ဦး ဆုံးအလျားလိုက်မျဉ်းကြောင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးမည်သည့်နံပါတ်များတွင်ရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့်ပျောက်ဆုံးနေသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ အချည်းနှီးသောရင်ပြင်များကိုပျောက်ဆုံးနေသောနံပါတ်များနှင့်ဖြည့်ပါ။ ကော်လံရှိနံပါတ်များကိုဂရုပြုခြင်းဖြင့်၎င်းသည်ထပ်ခါတလဲလဲမဖြစ်စေရန်သေချာစေသည်။
ပထမစာကြောင်းကိုဖြေရှင်းပြီးတဲ့နောက် ဒုတိယလိုင်းသို့သွားပြီးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြန်လုပ်ပါ။ သင့်တွင်ရှိပြီးသားနံပါတ်နှင့်မည်သည့်နံပါတ်များကိုစတင်ဖြည့်စွက်ရန်ကြည့်ပါ။ ဒုတိယလိုင်းတွင်နံပါတ် ၁ မရှိပါကပထမဆုံးဗလာစတုရန်းသို့သွားပြီး ၁ ရေးပါ အဲဒီစတုရန်းအတွက်ကော်လံကိုကြည့်ပါ။ အကယ်၍ နံပါတ် ၁ သည်ထိုကော်လံတွင်ရှိနှင့်လျှင်၎င်းကိုဖယ်ရှား။ အခြားစတုရန်းတစ်ခုတွင် 1 ကိုရေးပါ။ သင်သည်စတုရန်းတွင်ရှိပြီးဖြစ်သောမည်သည့်နံပါတ်ကိုထပ်ခါတလဲလဲမပြုသည်ကိုအမြဲစစ်ဆေးရန်သတိရပါ။
ဒီရစ်သမ်ကိုအဆုံးတိုင်အောင်လိုက်နာပါ၊ သင် Sudoku ဂိမ်းကိုသင်တည်ဆောက်နိုင်ပါပြီ။ နောက်ဆုံးတွင်နံပါတ်များကိုထပ်ခါထပ်ခါမပြောဘဲကိုက်ညီသည့်နေရာတစ်ခုကိုရှာဖွေရန်ပိုမိုခက်ခဲလာသည်၊ သို့သော်မည်သည့်အရာကမဆိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်နေရာနံပါတ်များကိုပြောင်းလဲရန်ကြိုးစားနေသည်။
အမှတ်အသားများကို သုံး၍ ဤအလွန်ရိုးရှင်းသော (နှင့်ပင်သိသာသည့်) အကြံပေးချက်များကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
မည်သည့်အချက်မဆို၊ အမှတ်အသားများတွင်နံပါတ်တစ်ခုသာရှိသောဆဲလ်များအတွက်ဂိမ်းကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ပါ။ ၎င်းသည်ထိုဆဲလ်အတွက်ဖြစ်နိုင်ချေတစ်ခုတည်းရှိကြောင်းဖော်ပြသည်။
မကြာခဏအနီးကပ်ကြည့်ရှု, သင်က "ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်လျှို့ဝှက်နံပါတ်သာဤနံပါတ်သည်အမှတ်အသားများတွင်သာမတွေ့ပါ။ ၎င်းသည်အတန်း၊ ကော်လံသို့မဟုတ် 3x3 ဇယားကွက်အတွင်းတစ်ခုတည်းသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အခြားနံပါတ်များအလယ်တွင်သာတွေ့နိုင်သည်။ ပုံကိုဘေးဘက်ရှိကြည့်ပါ။
ဤပုံတွင်၊ 1 နှင့် 8 နံပါတ်များသည်သူတို့၏သက်ဆိုင်ရာ 3x3 Grid များ၌တစ်ကြိမ်သာပေါ်လာသည်ကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ ဤအချက်က၎င်းတို့အားထိုရာထူးများတွင်သေချာပေါက်ထားရမည်ဟုဖော်ပြသည်။
၁။ သင်သည်မည်သည့်အချိန်တွင်တူညီသောနံပါတ်များကိုအုပ်စုတစ်ခု၏အမှတ်အသားများ (အတန်း၊ ကော်လံသို့မဟုတ်ဇယားကွက်) တွင်သာတွေ့ရှိပါကဆိုလိုသည်မှာ ဒီ pair တစုံသေချာပေါက်သည်ဤဆဲလ်နှစ်ခုထဲမှာပေါ်လာရပေမည်။ အောက်ကပုံကိုကြည့်ပါ။
၂။ ဒီပုံမှာကိန်းဂဏန်း ၁ နဲ့ ၃ ဆိုတာကဆဲလ်နှစ်ခုထဲမှာတစ်ခုတည်းရှိနေတာကိုတွေ့ရလို့ဒီဆဲလ်တွေမှာသုံးရမယ်။ ဆဲလ်တစ်ခုစီတွင်မည်သည့်နံပါတ်ရောက်ရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိပါ။ သို့သော်၊ ၁ နှင့် ၃ သည်အခြားအချည်းနှီးသောဆဲလ်များ၌မပေါ်နိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ ထို့ကြောင့်၊ တစ်ခုစီတွင်အခွင့်အရေးတစ်ခုသာရှိသည်။
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကိုမသုံးလိုသူများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးအလွန်အသုံး ၀ င်သောမဟာဗျူဟာကိုရှင်းပြပါမည်။
အဆိုပါကူးလိုင်းများ technique ကိုဖြစ်နိုင်သည် Sudoku ကစားတဲ့အခါလူတွေပထမဆုံးသင်ယူတာ။ ကစားသမားများသည်လေ့လာသင်ယူခြင်းသည်ရိုးရှင်းပြီးအခြေခံကျသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
၎င်းတွင်ကစားသမားသည်နံပါတ် (များသောအားဖြင့်ဂိမ်းတွင်အများဆုံးဖြစ်သည်) ကိုရွေးပြီးထိုနံပါတ်ရှိသည့်လိုင်းများနှင့်ကော်လံများတွင်စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကိုဆွဲရမည်။
အောက်ပါဥပမာတွင်နံပါတ် (၉) ကိုရွေးချယ်သည်။ ၎င်းတွင်ရှိသည့်နေရာအားလုံးကိုရှာပြီးနံပါတ် (၉) ကိုထိုရာထူးများ၌မထည့်နိုင်ကြောင်းညွှန်ပြရန်လိုင်းများနှင့်ကော်လံများပေါ်တွင်စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကိုရေးဆွဲသည်။ ဤအရာပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လွတ်လပ်သောရာထူးများကိုအစိမ်းရောင်ဖြင့်မှတ်သားသည်။
မှတ်ချက် ဖြေ။ ။ မှတ်သားဖို့ကအရေးကြီးတယ်၊ အချည်းနှီးသောဆဲလ်အချို့သည်စိတ်ကူးစိတ်သန်းများမှဖယ်ထုတ်ခြင်းမခံရသော်လည်း၎င်းတို့သည် 9x3 ဇယားကွက်တစ်ခုတည်း၌နံပါတ် ၉ ရှိသောကြောင့်လွတ်လပ်စွာမှတ်သားခြင်းမခံခဲ့ရကြောင်းသတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။
လွတ်လပ်သောနေရာများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အလယ်ဗဟို 3x3 ဇယားကွက်၌နံပါတ် ၉ အတွက်အခမဲ့နေရာတစ်ခုသာရှိသည်ကိုတွေ့နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုထိုနေရာတွင်ထားနိုင်သည်။
ဤအရာပြီးဆုံးပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့ထည့်လိုက်သောနံပါတ်အတွက်စိတ်ကူးမျဉ်းများ၏လုပ်ငန်းစဉ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်သည်။ ရလဒ်ကိုစစ်ဆေးပါ။
နောက်တဖန် ကျနော်တို့အသစ်တစ်ခုကိုလှုပ်ရှားမှု၏ရှာဖွေရေးအတွက်အခမဲ့ရာထူးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရပေမည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်းအောက်ပိုင်းအလယ်ဗဟိုဇယားကွက်တွင်နေရာလွတ်တစ်ခုသာရှိသည်။ ပြီးရင်နံပါတ် ၉ ကိုသွင်းပြီးအပေါ်ကလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုပြန်လုပ်ပါ။
ဤတစ်ကြိမ်တွင်ဘယ်ဘက်အောက်ထောင့်တွင်လွတ်လပ်သောနေရာတစ်ခုတည်းပေါ်လာသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၉ ကိုနေရာချကာမဟာဗျူဟာကိုဆက်ခဲ့သည်။
ယခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်နံပါတ် ၉ အတွက်အခမဲ့ရာထူးလေးခုရရှိထားပြီဖြစ်သည်၊ မည်သည့်အရာကမျှ 9x3 ဇယားကွက်တွင်ထူးခြားသည်။ ထို့ကြောင့်ဤနည်းဗျူဟာကို အသုံးပြု၍ မည်သည့်နေရာတွင်ထားရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိနိုင်ပါ။
ဖြစ်နိုင်သည့်နည်းတစ်နည်းမှာ နံပါတ်အသစ်တစ်ခုကိုရွေးပြီးအခုဖော်ပြလိုက်တဲ့နည်းဗျူဟာကိုပြန်လုပ်ပါ။ ဒီနည်းဗျူဟာကိုသုံးပြီးဆဲလ်အများစုကိုသင်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်လိမ့်မယ်။
ယခုတွင်သင့်တွင်နည်းဗျူဟာအချို့ရှိနေပြီ ဖြစ်၍ Sudoku ကိုကစားခြင်းအားဖြင့်သင်၏ ဦး နှောက်ကိုပျော်ရွှင်စွာလေ့ကျင့်ပါ
Sudoku သည်အချိန်နှင့်အတွေးအချို့လိုအပ်သောကစားနည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုသိလျှင်၎င်းသည်ကစားရန်လွယ်ကူလာသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် Sudoku 9x9 စားပွဲတစ်ခုပါ ၀ င်သည်, ၏ဖွင့်ထားသည် ၉ ခု, ရှိသည် အသီးသီး9ဆဲလ်.
ဂိမ်း၏အဓိကအယူအဆမှာကစားသမားဖြစ်သည် ဇယားကိုနံပါတ် ၁ နဲ့ ၉ အထိနံပါတ်တွေဖြည့်သင့်တယ်၊ တူညီတဲ့လိုင်းဒါမှမဟုတ်ဇယားကွက်ထဲမှာနံပါတ်တွေကိုထပ်ခါတလဲလဲမပြောဘဲနေသင့်တယ်။
ဆူဒိုကူစားပွဲ တစ်ခုတည်းဖြေရှင်းချက်ရှိသည်ဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြသည် ထိုကဲ့သို့သောကျွန်ုပ်တို့သည်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ထိုအရာကိုမှန်ကန်စွာမရရှိခြင်းမှာပုံမှန်ဖြစ်သည်။
စဉ်းစားရန်နောက်ထပ်အကြံပြုချက်ဖြစ်ပါတယ် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသုံးပြုခြင်း။ အမှတ်တံဆိပ်အားဖြင့်ကျနော်တို့ဆိုလို တစ်ခုချင်းစီကိုဆဲလ်အတွင်းအမျိုးမျိုးသောဖြစ်နိုင်ခြေရေးသားခြင်း။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ အကယ်၍ ဆဲလ်တစ်ခုတွင်နံပါတ် ၃ နှင့် ၉ ရှိနိုင်ပါက၊ စံနမူနာမှာ (သေးငယ်သောအရွယ်အစားဖြင့်) နံပါတ်နှစ်ခုလုံးကိုညွှန်ပြရန်နှင့်ထိုဆဲလ်နှင့်သက်ဆိုင်သောနံပါတ်မရောက်ရှိမချင်းကျန်ဇယား၏ကျန်အပိုင်းများကိုဖြေရှင်းရန်ဖြစ်သည်။
Sudoku ၏မူကွဲအချို့တွင် ၄ င်းတို့၏ resolution ကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်အတွက်ဒီအသေးငယ်တဲ့အမှတ်အသားများကိုဇယားထဲမှာထည့်ထားပြီးဖြစ်သည်။ အမှတ်အသားများပါ ၀ င်သောဤဗားရှင်းများတွင်သင်ပဟေpိကိုဖြေရှင်းရန်ကူညီမည့်လှည့်ကွက်အချို့ရှိသည်။
Sudoku ဇယားတွင် (အမှတ်အသားများဖြင့်) နံပါတ်တစ်ခုကိုဆဲလ်တစ်ခုတည်း၌သာတွေ့လျှင်၎င်းသည်aဖြစ်သည် ဆဲလ်တစ်ခုတည်းအတွက်ဖြစ်နိုင်ချေတစ်ခုတည်းရှိကြောင်းအချက်ပြပါဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ထိုနံပါတ်ကိုဆဲလ်အတွင်းချက်ချင်းဖုန်းဆက်ရမည်။
Sudoku ဟာတခါတလေရှုပ်ထွေးတဲ့ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပေမယ့်ဒီဂိမ်းကိုတွက်ကြည့်ဖို့လှည့်စားနည်းတွေနည်းနည်းပဲရှိတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အမှတ်တံဆိပ်များရှိသည့်ဂိမ်းများတွင်တစ်ခါတစ်ရံ "ဒါခေါ်"လျှို့ဝှက်နံပါတ်သာ".
ဤနံပါတ်ကိုအခြားဆဲလ်များနှင့်တွဲဖက်ထားသည့်ဆဲလ်ထဲ၌သာမတွေ့ရပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်အတန်း၊ ကော်လံ၊ သို့မဟုတ် 3x3 ဇယားကွက်အတွက်တစ်ခုတည်းသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်သည်။
ဆိုလိုသည်မှာ၊ ဥပမာအားဖြင့် 3x3 ဇယားကွက်ထဲတွင်နံပါတ်3ပေါ်လာပြီးထိုဇယားကွက်၏အခြားဆဲလ်များ၌မပေါ်လာပါကနံပါတ် ၃ သည်ထိုဆဲလ်တစ်ခုတည်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ညွှန်ပြချက်ဖြစ်သည်။
သငျသညျတူညီသောနံပါတ်များကို pair တစုံကို 3x3 ဇယားကွက်၏အမှတ်အသားများတွင်သာရှာတွေ့လျှင်၊ ဤအဆဲလ်နှစ်ခုအတွက်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ရမည်ဤနေရာတွင်ပေါ်ပေါက်လာသည့်တစ်ခုတည်းသောမေးခွန်းမှာတစ်ခုစီ၌တစ်ခုတည်းဖြစ်မည်။
သင်၏ Sudoku ဗားရှင်းတွင်အမှတ်အသားများမပါရှိပါကသို့မဟုတ်သင်အမှတ်အသားများကိုမသုံးလိုပါကဤဂိမ်းကိုသင်ကျွမ်းကျင်ရန်အခြားရိုးရှင်းသောနည်းဗျူဟာတစ်ခုရှိသေးသည်။
၎င်းကိုအလွန်ရိုးရှင်းစွာအသုံးပြုခြင်းကြောင့် Cross Line နည်းစနစ်ကိုကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ ပါဝင်သည် ဇယားတစ်ခုလုံးတွင်အများဆုံးတွေ့ရမည့်နံပါတ်ကိုရွေးချယ်ပြီးဆွဲပါ (ရှုပ်ထွေးမှုမရှိစေရန်ခဲတံဖြင့်) ထိုတူညီသောနံပါတ်နှင့်ဆက်စပ်သောအတန်းနှင့်ကော်လံရှိလိုင်းများ။
မျဉ်းကြောင်းတွေအားလုံးကိုရေးပြီးတဲ့အခါမှာအဲဒီမျဉ်းကြောင်းတွေထဲမှာမပါ ၀ င်တဲ့ဆဲလ်တွေကိုအမှတ်အသားပြုသည့်အဆင့်သို့ကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတယ်။ ထို့နောက်မည်သည့် 3x3 ဇယားကွက်များတွင်နံပါတ် ၉ မရှိသောနေရာနှင့်နေရာချရန်နေရာ (အလွတ်မပါ) ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်။
ဒီပြီးတာနဲ့ အခြားနံပါတ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးထိုနည်းတူပင်ထပ်တူလုပ်ပါအားလုံးဆဲလ်တွေပြည့်မှီတိုင်အောင်။ အဆုံး၌၊ တူညီသောလိုင်းသို့မဟုတ်ဇယားကွက်တွင်ထပ်ခါတလဲလဲနံပါတ်များရှိမရှိစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။ ထပ်ခါတလဲလဲနံပါတ်များမရှိပါက, ထို့နောက်ဂိမ်းအနိုင်ရ။
Sudoku ပဟေeachိတစ်ခုစီအတွက်အများဆုံးအချိန်မရှိပါ, နှင့်ကစားသမားတစ် ဦး ချင်းစီနေသမျှကာလပတ်လုံးသူတို့လိုချင်သလောက်ဂိမ်းခံစားနိုင်ပါတယ်။
တစ် ဦး က Sudoku ဂိမ်း5နဲ့ 45 မိနစ်အကြားကွဲပြားနိုင်သည်, ဒါပေမယ့်အားလုံးသည်ကစားသမား၏အတွေ့အကြုံနှင့်ဂိမ်း၏ခက်ခဲမှုအဆင့်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ရိုးရိုးလေးပြောရလျှင်ဂိမ်းကစားရန်ခက်ခဲလေ၊ ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုပိုမိုလိုအပ်လေ၊
အခက်အခဲအတွက် ၎င်းသည် ၀ ဘ်ဆိုဒ် (သို့) မဂ္ဂဇင်း၏ခေါင်းစဉ်တွင်ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ အရင်ကဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူကစားနိုင်ပြီးအတွေ့အကြုံပိုရှိတဲ့ကစားသမားတွေအတွက်အရမ်းခက်ခဲပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်သူများအဘို့, ပိုမိုခက်ခဲအဆင့်ဆင့်ကယ့်ကိုစိန်ခေါ်မှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်, အဆင့်ဆင့်အလွန်အချိုးကျကြည့်ဖို့စတင်အဖြစ်နံပါတ်များကိုထင်ဟပ်ပုံရသည်ရသော။ ထို့ကြောင့်အခြေခံကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုအပြင် သငျသညျလညျးအခြို့သောမဟာဗျူဟာလိုအပ်ပါတယ်။
ဒီတော့ဆောင်းပါးနိဂုံးချုပ်။ ဂုဏ်ယူပါတယ်! ယခုသင်သည် Sudoku ကစားနည်းကိုသိပြီးဖြစ်သည်၊ သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးသင်ဤပဟေlesိများကိုဖြေရှင်းရန်ဗဟုသုတများစွာရှိသည်။